Iingcebiso zokukhetha amagama amahle kubalinganiswa bakho boncwadi | Uncwadi lwangoku
Amaqhinga okukhetha amagama afanelekileyo kubalinganiswa bakho boncwadi
Sonke siyamazi ukuba ngubani uHarry Potter ukuba simthiya igama ... Ewe, kuyinyani, ukuba abaninzi bamazi kuphela kwiifilimu zakhe, kodwa phantse wonke umntu uyazi ukuba ubhekisa kumlinganiswa ovela kwisaga enkulu yoncwadi lolutsha olumnandi olwenziwe Umbhali oliNgesi uJK Rowling.
Kodwa kutheni amanye amagama abalinganiswa boncwadi enamathela ngcono kwimemori yethu kunamanye? Ngaba ucinga ukuba kungenxa yempumelelo yencwadi okanye yenye into? Ndiyacinga kungenxa yayo yonke into encinci: ukuba le ncwadi ilungile, kwaye ikhuthazwe ngokwaneleyo kwaye ifikelele kumfundi, ukuba idlulisile amaxabiso kunye neemvakalelo ngokomfundi nakwinqanaba lakhe lobomi ngelo xesha, ukuba ungumbhali owaziwayo, njl. Kodwa ngelishwa, ayizizo zonke esizalisekisayo eli nqaku lokugqibela. Ayisithi sonke uArturo Pérez Reverte okanye uCarlos Ruíz Zafón, ukubeka nje ababhali ababini abaphumeleleyo ngoku.
Kungenxa yesi sizathu ukuba namhlanje besifuna ukunika ababhali, ukongeza kubafundi abaqhelekileyo bebhlog yethu, uthotho lwamaqhinga okukhetha amagama afanelekileyo kubalinganiswa boncwadi lwangoku kunye nolwexesha elizayo.
Ungababiza njani abalinganiswa bethu boncwadi?
Igama olikhethileyo kumlinganiswa wakho kufuneka lihambelane neempawu kunye nendlela yobuntu, oko kukuthi, kufuneka ukunamathela. Kungenzeka ukuba umlinganiswa owazalelwa eWales, umzekelo, ubizwa ngokuba nguAntonio, kodwa ngaba ngoyena uqhelekileyo? Yile nto siyithethayo ngokuyinika igama elifanelekileyo nelifanelekileyo.
Akunyanzelekanga ukuba ube yinqaba kakhulu Ukukhetha igama… Ewe, amagama okuqala angatsala ingqalelo engakumbi, kuyinyani, kodwa ngenxa yokuba igama lilula, njengoMaría, uJuan okanye u-Alfonso, oko akuthethi ukuba kulula ukulibala.
Abanye abalinganiswa abadingi negama! Ngokubhala, ngamanye amaxesha siyaphazama kwicala lokucaciswa kwaye kusemthethweni, kodwa kutheni bonke abalinganiswa benamagama abo? Abanye banokwaziwa ngokuba ngabo Isidlaliso okanye ngokulula nje ngokomzimba. Imizekelo: "Isiqhwala", "Esinye blonde", njalo njalo.
Sebenzisa oonobumba bokuqala bamagama abo. Ngamanye amaxesha unobumba olulula, kule meko igama lokuqala, unokukhunjulwa ngcono kwaye utsala ingqalelo ngakumbi kunegama ngokwalo. Imizekelo: de de Magdalena, X. de Xavier, njl.
Ngaba ungayenza Ukusetyenziswa kwesichazi-magama samagamaKokubini abasetyhini kunye nabesilisa, ukuba uhlala ufumana ngokufanayo kwaye ufuna igama loyilo neliyahlukileyo.
Kwaye wena, yeyiphi indlela oqhele ukusebenzisa ngayo ukukhetha igama lomlinganiswa ophambili okanye abalinganiswa besibini ekubhaleni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Amaqhinga okukhetha amagama afanelekileyo kubalinganiswa bakho boncwadi
UDaniela de la cruz sitsho
Amanqaku amahle okugcina engqondweni, nangona ndisiya ngakumbi ngentsingiselo, imvakalelo ishiya xa ndiyibiza kwanendlela abadibanisa ngayo amagama nabanye: 3
Phendula kuDaniela de La cruz
Isishwankathelo esifutshane sencwadi "Isixeko kunye neenja" nguMario Vargas Llosa
Amanye amanqaku anomdla wokubhala